12 Kwe-Anime Eningi Ezokwenza Ubuze Impilo - Okunye
12 Kwe-Anime Eningi Ezokwenza Ubuze I-WTF Iyenzeka
Ama-Anime ahlukahlukene. Lokho kusho ukuthi kukhona okuningi kuso.
I-Anime inokukhetha OKUNINGI, ukuthi lonke uhlobo lwabalandeli luzothola okuthile amasudi ukunambitheka kwabo.
Kepha noma kunjalo - kukhona imibukiso ethile ye-anime, njengoba ngiyibona, lokho kuzokwenza ukukhwabanisa ngenxa yokuthi babi kangakanani, benziwa kabi, noma 'baxakile'.
Kwesinye isikhathi ngisho okuhle kakhulu i-anime nayo ingakwenza uzenyezele.
Nalu uhlu lwemibukiso ongacabanga ngayo ngaphambi kokuthi uthathe isinqumo sokubhekana nayo.
Imibukiso ye-Cringiest Anime:
1. Inja Nesikele
Inja Nezikere… ngiluchaza kanjani lolu chungechunge lwe-anime olusangene.
Lapho ngiqala ukuyibona ngacabanga 'hmmm, noma izilinganiso zingaphelele,' Kungangimangaza '. Impela ngu ukumangala bengithi umxhwele. Kepha kungimangazile ukuthi indlela amahlaya axakile futhi ayijwayelekile ngayo.
Umlingiswa oyinhloko wesilisa uzalwa kabusha njengo- inja ngemuva kokuba ebulewe. Ngesikhathi sokushona kwakhe, kunentombazane enezinwele ezinde ezimnyama esesigcawini 'sobugebengu'.
Yebo, le ntombazane ikhona uhlanya othola 'ukuvuswa' ekuhlukumezeni uHarumi (umfana ozalwa kabusha njengenja encane enhle, engenakuzisiza). Futhi yilokho konke i-anime imayelana: nokuhlukunyezwa kanye nezimilo zezilwane eziyinqaba.
Ngiyaqikelela ukuthi ubuke le anime YONKE indlela, ngaphandle ukugoba noma ukufaka ikhanda lakho ebhakedeni lamanzi abandayo… Ngizokunikeza okuthengiswayo okuhlobene ne-anime MAHHALA uma uphatha.
Okuhlobene: Imibukiso Eyi-10 Yama-Anime Ebiyimbi Kakhulu Ngiyishiyile
2. Uthando, Chunibyo & Okunye Ukukhohlisa
Ngiyavuma - le anime ingenye yezintandokazi zami ze 'lowkey' Ezothando uchungechunge. Futhi angiyena ngisho nomlandeli omkhulu wezothando, futhi.
Kodwa angizange ngizizwe ngale ndlela ekuqaleni. Yingakho mina kwehlile ngaphambi kwesiqephu 5.
Kepha kunokuthile okungidonsile emuva ngathi 'yinike ithuba' ngenza njalo. Futhi-ke namanje kungenze ngazidlalela ngamahlaya nokuziphatha okukhohlisayo komlingiswa oyinhloko: URikka Takanashi.
Ngalesi sikhathi uzothanda lolu chungechunge, noma uzoluzonda ngenxa yokuthi lukuphazamisa kangakanani. Kepha uma ungena - lena yi-anime enomvuzo enezinye ze- okuhle kakhulu ezothando nezamahlaya engizibonile.
Abalingiswa abakhunjulwa, futhi amahlaya anokunambitheka kwawo. Ukwenza kube 'lutho' njengokuthi uzoke unambithe kuze kufike rom-com noma ucezu lwempilo jikelele.
3. UZiqu-zintathu Wesikhombisa
Ngibone i-TON ye-anime ye-Ecchi. Kukude nohlobo lwami engiluthandayo, ngoba kuncane kakhulu, corny futhi uzama kanzima ukuvusa uhleko. Kuba sengathi abadali baba 'namavila' no-Ecchi isikhathi esiningi.
UZiqu-zintathu weSikhombisa kuyinto ukuthi uhlobo lwe-anime. Akukho lutho olukhethekile, olunomvuzo noma 'oluhle' ngakho.
Ezingxenyeni ezimbalwa zokuqala mina ushwabene futhi ngazibophezela ebusweni ngemizamo yokuphelelwa yithemba yokukhombisa insizakalo yabalandeli kanye nezindlovukazi ezindala ezifanayo esizibonile zezikhathi eziyi-1000. Ngendlela engakhuthazi ..
Akukho okusha futhi lutho ngakho kungenza ngifune ukuthi 'lokhu kufanelwe ithuba'. Ikakhulukazi nokuthi ikwenze kangakanani ukhwantabalise abalingiswa nesitayela esingenamqondo sokukhuluma izindaba.
4. Udidekile kanjani, Miss Ueno
Uma ubuka isiqephu esingu-1 se-anime, futhi kuba sengathi uzihudula phansi, lokho kuhlale kuyisibonakaliso esibi.
Kepha uma uthatha imibono enesibindi, yebhola yokuthola omunye umlingiswa ukuthi aphuze i- 'piss' eguqulwe yaba amanzi, kungakwenza nje ukuthi unwaya ikhanda lakho.
Lokhu kufanele kube '' amahlaya ', futhi ngiyakuthola: Umqondo waseJapan wamahlaya uwukuthi kwehlukile entshonalanga nasemhlabeni jikelele.
Yingakho ngithanda i-anime.
Kepha Uyindida Kangakanani, Miss Ueno kungahle kube ngokweqile. Futhi uzohlanya ngokushesha lapho i-anime iqala. Yonke indlela kuze kube sekupheleni kochungechunge.
5. UDagashi Kashi
UDagashi Kashi umayelana namaswidi aseJapan. Uhlobo “olushibhile” eJapane.
Ungahamba uze uthi inhloso ye-anime 'ukukhangisa' amaswidi kaDagashi, futhi lutho Okuningi.
Ngaleyo ndlela 'bonke baphuma' bangena ekukhiqizeni le anime, futhi basekela konke okuzungeze iDagashi.
Ngibuke KONKE kukaDagashi Kashi, ngakho-ke ngiyazi njenge-anime ukuthi 'kuhloniphekile' kepha akukho okunye okudlula lokho.
Umdlalo wamahlaya ugcwele izigcawu ezizokwenza ukuthi umlandeli ojwayelekile “aqhume” futhi ahlahle amehlo akho. Ngoba ngezinye izikhathi kuncane kakhulu ukubhekana nakho, noma ngisho nokuthatha ngokungathí sina.
Kodwa ngokusho lokho - kunjalo namanje i-OK anime show.
Kodwa lokho kuya ngokuthi uyibona kanjani, nokuthi yini oyifunayo ochungechungeni lwamahlaya.
6. ISaga SaseZombieland
Kunjalo - ngishilo. I-Zombieland Saga iyi-anime ehlabayo, exakile, engajwayelekile futhi engenangqondo kimi. Futhi ngisho lokho naphezu ukuthi le anime idume noma yamukeleka kanjani emphakathini ngo-2019.
Ungacabanga ngeZombieland Saga njengenguqulo “engajwayelekile” ye- Uthando Phila Isikole Project.
Umlingiswa ngamunye unobuntu bakhe, ama-quirks nemiklamo ebasiza ukuthi 'bagqame' esixukwini.
Kepha i-anime ivela kanjani, futhi indaba elandelayo izokwenza ukuthi ubuze i-WTF ukuthi iyaqhubeka. Kuya ngokuthi uluhlobo luni lomlandeli we-anime, nokuthi ukhangwa yini.
Izwe Eliyisidina Lapho Umqondo Wamahlaya Angcolile Ungekho. Lesi yisihloko ESIDE salolu chungechunge kuhlelo lwesiNgisi.
Kuyahlekisa, ngiyazi. Kepha lokho ukuhlukaniswa okulula KWAKUTHI ongena kukho ngaphambi kokubuka….
Noma ngilinganisela le anime 9/10 ngaphandle kokungabaza, ngiyabona ukuthi 'icrinky' kanjani. Noma uthanda i-anime ye-Ecchi.
Okokuqala - uBlue Snow (umlingiswa oyinhloko) ugqoka izikhindi zangaphansi ekhanda lakhe. Ukwenza lokhu ukwenza iphuzu elingahluziwe ngokumelene neSJW'S ayilwa nayo.
Futhi lokho kukodwa akuklwebhi ngisho nobuso ukuthi i-anime le ithanda kanjani. Kodwa wena namanje ungahle uyithande, noma ngabe kunjani.
ICambuls Gambler (Kakegurui) yeqise kwezinye izici. Njengezimpawu zobuso (ezingokoqobo). Kepha okunye ukubukeka kobuso kuseceleni 'okumangazayo, okungathandeki'.
Futhi-ke kukhona abalingiswa, ikakhulukazi maqondana neziqephu ezimbalwa zokugcina, kunjalo uyahlanya uzohlanya hhayi ukuqubuka lapho ubona izinto zidlalwa.
Lokho akwenzi i-anime kaKakegurui embi, ngicabanga ukuthi 'KULUNGILE'.
Uma uthanda amasu kanye nendlela 'yokuthatha ingozi' ekudlaleni imidlalo, uzothanda uKakegurui. Kepha konke kwehlela kulokho okufunayo, nokuthi yini umkhawulo wakho.
9. Mthandi Wobushiqela
I-Love Tyrant yi-parody ehlakaniphile engingake ngiyibone uma nje i-anime isaphila. Futhi angikhulumi uhlobo olungenangqondo lwe- 'Gintama'.
Cha, ngiqonde uhlobo lwesilima olwenza ukuthi ufune iconsi i-anime oyibukayo.
Bese ukhohlwa konke osanda kukubona.
Umqondo uthathwe ku- Incwadi yokufa . Wonke umuntu obhalwe igama ubhalwe ku- Qaphela Inothi uthandana nomuntu ngubani kubhaliwe Kuze kube seqophelweni lokuthi bangenza noma yini.
Ngisho ukuzibulala uma kubuzwa kubo.
Kepha amahlaya ngumthwalo we 'bollocks' njengoba sisho e-UK. Okungcono kakhulu ukuthi yi- 'Plain' kanti okubi kakhulu 'yikhophi nokunamathisela konke okuvele ukubonile'.
Futhi lokho kuphezu kokuthi uzokhwabanisa kangakanani uzama ukudlula kusiqephu ngasinye.
Bulala uLa Kill - yebo, omunye wami imibukiso ye-anime eyintandokazi YONKE isikhathi . Angisoze ngakukhohlwa uma nje ngisaphila.
Kepha… Ngiyavuma. Lolu wuhlobo lwe-anime oluzokukhathaza ngezinhlamvu ezingezinhle, izikhundla zocansi. Futhi kwesinye isikhathi okungenasidingo ama-engeli amaphuzu ekhamera at.
Kimi - Ukubulala uLa Kill yisibonelo esingajwayelekile yochungechunge lwe- 'Ecchi' olwenziwe kwesokudla. Akuyona imfucumfucu, futhi insizakalo yabalandeli ayisusi esenzweni esikhanyayo nakopopayi abahle.
Kodwa noma kunjalo - nginesiqiniseko sokuthi kukhona abalandeli abangahle 'bakhungatheke' noma ngabe 'muhle' kanjani uKill La Kill. Noma yakhiwe kahle kangakanani ngokuya ngendaba nesakhiwo.
11. Ukujwayeleka Kweziro
I-Familiar Of Zero iyi-anime emayelana ukuhlukumeza. Noma kungahle kube njalo.
Kuthatha uhlobo olujwayelekile lwe-arch 'Tsundere' bese luyishayela kuze kube manje lukhuphuke odongeni lapho lungafinyeleleki khona. Futhi uyahlanya ngamazinga we 'Tsundere'.
Umlingisi ophambili uthandana nentombazane ehlanyayo ehlukumeza, ishaye futhi 'ishaye ophilayo sh ** kuye', ngokoqobo. Futhi lokho kimi yingxenye engenza ngihlanye. Kuzophoqeleka ukwenza 'abalandeli' abaningi bakhungathe futhi (njengoba ngazi kuqala).
Kepha uma kungenjalo - ngamunye aye kowakhe. Yazi nje ukuthi amahlaya ahlukile kunalokho oyikho esetshenzisiwe ukubona.
Futhi lokhu sizokuqeda ngalokhu Re: Zero - Ukuqala Ukuphila Komunye Umhlaba. Uchungechunge lwezengqondo ngu U-White Fox, futhi inqwaba yezigcawu ezizokwenza ukuthi 'ucwebe' ngokuthi kanjani izindlu Ikona.
USubaru Natsuki ufakwa esihogweni. Okubi nakakhulu: akavunyelwe ukwabelana ngezinkinga zakhe nanoma ubani, ngenxa yesiqalekiso esihlala ngaphakathi kuye.
Ungahle ukhophoze ekupheleni kwesiqephu 1. Noma ekuqaleni kwesiqephu 2, noma kuyo yonke isizini ezindaweni ezahlukahlukene ze-anime. Kepha uzo ukukhwabanisa ngenye indlela, ngoba yilolo hlobo lwe-anime Re: Zero.
Ngingasho ukuthi leyo yingxenye yesizathu sokuthi iphumelele kakhulu futhi 'ikalwe kakhulu' ngokujwayelekile. Ngoba abalingiswa nokuxoxwa kwendaba kusephuzu, kungakhathalekile.
Izinja Ezilahlekile zeBungo.
Abalingiswa be-Anime abathatha 'Ukuba yi-Eccentric' ezingeni elisha lonke
Imibukiso emi-5 exakile kodwa ephumelelayo ezokugqugquzela ukuthi ufunde kanzima